RASMI: Macallin Mikel Arteta oo xaqiijiyey xiddig dhammaadka xilli ciyaareedkan ka tagaya kooxda Arsenal – Gool FM
(London) 18 Maajo 2021. Tababare Arteta ayaa xaqiijiyey in David Luiz uu ka tagi doono Kooxda Arsenal dhammaadka xilli ciyaareedkan.
Daafaca Arsenal ee David Luiz ayaa wadahadallo bilo qaatay la qaatay Macallin Mikel Arteta ka hor inta aan la go’aansan inuu baxayo.
34-sano jirkaan ayaa xagaagan noqon doona beeca xorta ah kaddib markii uu dhammaystay labo sanadood oo uu ku qaatay Waqooyiga London.
Dhaawacyo ku soo noq-noqday ayaa ka dhigay in xiddigan reer Brazil aysan u badnayn inuu wax ku dari doono 30-kiisa kulan ee tartammada oo dhan uu ciyaaray xilli ciyaareedkan.
“Wadahadal kaddib waxaan go’aansannay inay tahay sida ugu fiican ee hadda lagu sameyn karo,” Ayuu yiri Macallin Arteta.
“Waxaan isku dayay inaan caawiyo intii aan kari karo – kooxdana sidoo kale,” ayuu sii daba dhigay hadalkiisa.
Luiz, kaasoo Arsenal kaga soo biiray kooxda ay London ku xafiiltamaan ee Chelsea, markaasoo ay 8 milyan oo gini ku soo qaateen sanadkii 2019-kii, waxaana uu ku guuleystay Premier League, Champions League iyo saddex FA Cup inta uu ka ciyaarayo England.
Liverpool oo indhaha ku haysa Bruno Fernandes-ka xiga... (Waa kee xiddigaasi, Kooxdee ayuuse ka tirsan yahay?)